Kaddib Fadeexadii Villa Park, Goolhayaha Ay Liverpool Saacadaha Ugu Dambeeya Suuqa Xidhiidhka Deg-Dega Ah La Samaysay Oo La Ogaaday - Gool24.Net
Kaddib Fadeexadii Villa Park, Goolhayaha Ay Liverpool Saacadaha Ugu Dambeeya Suuqa Xidhiidhka Deg-Dega Ah La Samaysay Oo La Ogaaday
Kooxda Liverpool ayaa la xusayaa inay xidhiidh la samaysay dhigeeda Tottenham Hotspurs oo ay kala hadleen suurogalnimada ay maalinta ugu dambaysa suuqa xagaaga 2020 kagala wareegi karaan goolhaye Paulo Gazzaniga.
Liverpool ayaa heshiisan isku dayaysa kaddib markii ay xalay guuldarro bahdilaad ah kala soo kulantay kooxda Aston Villa oo ay Villa Park ku booqdeen isla markaana natiijo 7-2 ah dhulka kusoo jiid-jiiday.
Goolhayaha dookha koowaad ee Liverpool ee Alisson Becker ayaa maqnaan doona mudo lagu qiyaasay lix toddobaad kaddib dhaawac tababarka ku gaadhay waxaana su’aal la gelinayaa Adrian oo dookha labaad ah.
Gazzaniga ayaa ah mid kamida goolhayayaasha bar-tilmaameedka u ah Liverpool oo xataa xidhiidh la samaysay Spurs si ay saacadaha suuqa uga hadhay uga heli karaan.
28 sano jirkan ayaa xilli ciyaareedkii hore wacdarro kusoo dhigay kooxdiisa kaddib markii uu buuxiyay booska kabtan Hugo Lloris oo mudo dhaawac ku maqnaa.
Liverpool ayaa goolhayaheeda kale ee da’yarka ah ee Kelleher ku darsanayn qorshayaasha kooxdeeda koowaad iyagoo u arka in heshiis amaah ah oo uu ku baxaa uu yahay waxa ugu wanaagsan ee loo samayn karo.
Wargeyska The Independent ayaa ah midka sheegaya in Liverpool ay xiiso ba’an u qabto saxeexa goolhayaha ree Argentina oo ay doonayaan inay dhammeeyaan isla maanta.
Klopp oo kaddib fadeexadii xalay kasoo gaadhay Aston Villa saxaafada la hadlay ayaa sheegay inuusan garanayn mudada uu Alisson ka maqnaan doono garoomada.
Si kastaba ha ahaatee, Liverpool ayaa wakhti muhiim ah galaysa kaddib marka fasaxa qaramada laga soo laabto iyadoo kulanka ugu soo horreeya oo Derby noqonaya la ciyaaraysa kooxda hoggaanka haysa ee Everton.